MUQDISHO, Soomaaliya - Saddex Saraal oo katirsan Ilaaladda Madaxtooyadda Villa Somalia ayaa xabsiga loo dhigay tacadiyo ay u geysteen Wariyeyaal ka howlgala magaaladda Muqdisho.
Saraakiisha oo aan magacyadooda la shaacin, ayaa waxay 18-kii bishan si xun ula dhaqmeen labo suxufi kuwaasoo ay jirdil u gesyteen kadibna inta indha ay uga xireen shaararkooda jiifiyay wadada Makka Al-Mukarama.
Wariyeyaasha ayaa ku guda jira duubista muuqaal wadooyinka waaweyn oo 18-kii bishan loo xiray dhagax-dhig uu Ra'iisul Wasaare Khayre ku sameynayay wadooyinka caasimadda ku xira Afgooye iyo Jowhar, oo dowladda Qadar ay maalgelinayso.
Sawirada suxufiyiinta wadada la jiifayay iyagoo indha ka xiran ayaa wabsadey baraha bulshada, oo aad looga falceliyay sida xun ee loola dhaqmay, iyadoo ay arintan ka hadleen mas'uuliyiin uu kamid yahay wasiirka Warfaafinta, Daahit Maxmuud Geelle.
Saraakiisha falkan ku kacay oo kamid yihiin Ururka 60-aad ee ciidamada Militeriga, ayaa lagu hayaa sida la sheegay xarunta dembi baarista [CID].